တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Samsung Galaxy Ace2GT-I8160 CWM and Root
Samsung Galaxy Ace2GT-I8160 Gingerbread ကို CWM ထည့်ဖို့နဲ့ Root ဖို့လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ..
1. CWM အရင်တင်ပါမယ်.. အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ..
Download CWM from One of the Following Links:
Download : Link 1 / Link 2
2. ရလာတဲ့ CWM.zip ကို SD Card ထဲထည့်ပြီး ဖုန်းမှာ တပ်ပါ..
Copy CWM.zip to SD card and Insert to Phone.
3. ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ.. ပြီးရင် Volume Up+Home+Power တွဲနှိပ်ပြီး Recovery Mode ကိုဝင်ပါ..
Shut down the Phone. Enter recovery mode by pressing Volume Up+Home+Power.
4. Recovery Mode ထဲမှာ apply update from external sdcard ကို Vol Up/Dwn ခလုတ်တွေသုံးပြီးရွှေ့ပါ.. ရောက်ရင် Home ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ.. ပြီးရင် ခုနက ထည့်ထားတဲ့ CWM.zip ကိုထပ်ရွှေ့ပြီး Home ကိုနှိပ်ပါ..
In Recovery Mode, Choose "apply update from external sdcard" by using Vol Up/Dwn Button and Press Home. And choose CWM.zip and Press Home.
5. CWM ကို တင်နေတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်.. ပြီးသွားရင်တော့ Reboot ကိုရွှေ့ပြီး Home ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ..
You can see CWM is installing. After Installed, choose Reboot and Press Home.
1. အောက်ကလင့်မှာ Root.zip ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ.
Download Root.zip from One of the Following Links:
2. ရလာတဲ့ Root.zip ကို SD Card ထဲထည့်ပြီး ဖုန်းမှာ တပ်ပါ..
Copy Root.zip to SD card and Insert to Phone.
4. Recovery Mode ထဲမှာ apply update from external sdcard ကို Vol Up/Dwn ခလုတ်တွေသုံးပြီးရွှေ့ပါ.. ရောက်ရင် Home ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ.. ပြီးရင် ခုနက ထည့်ထားတဲ့ Root.zip ကိုထပ်ရွှေ့ပြီး Home ကိုနှိပ်ပါ..
In Recovery Mode, Choose "apply update from external sdcard" by using Vol Up/Dwn Button and Press Home. And choose Root.zip and Press Home.5. Root လုပ်နေတာကို တင်နေတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်.. ပြီးသွားရင်တော့ Reboot ကိုရွှေ့ပြီး Home ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ.. ပြန်တက်လာရင်တော့ ဖုန်းက Root ပြီးသွားပါပြီ..
You can see Rooting. After this, choose Reboot and Press Home. After Rebooting, your phone has been rooted.
Posted by အောင်မျိုး at 12:48 AM